musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Shangu Zvese-Zvinosanganisira Zororo: ZveMhuri Yese!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Turks neCaicos Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Mhuri dzinofara paSandals!
Sandals Resorts rave rakafanana nemufananidzo wevaviri vanofara vachinakidzwa nerudo uye vasinganetseke zororo uko zvachose zvese zvinotarisirwa nekuti zviri zvese-zvinosanganisira. Asi ko kana iwe uri mhuri? PaSandals Beaches, mhuri yese inogamuchirwa!
Mahombekombe Anoshamisira Anosanganisira® zororo anosanganisira zvimwe zvezvinhu zvese kune wese munhu.
Pano pane yega yega yepasi uye yemvura mutambo pasi pezuva, kubva chero nguva gourmet yekudyira kusvika makumi maviri neshanu maresitorendi, kune zviitiko uye zvinobatsira zvemazera ese, uye yakasarudzika yemhuri-inoshamwaridzika masuti.
Iyi izororo remhuri ine yakawanda inclusions, yakawanda sarudzo, uye dzimwe nzira dzekunakidzwa nenguva muri pamwe chete.
Kuunza Wese Munhu Kuvhara - Vakaroorana, Mhuri, Shamwari Dzakanakisisa, Mapoka, uye Michato
Rwendo rwakakwana rwakamirira kuBeaches zvese-zvinosanganisira nzvimbo dzekugara muTurks & Caicos neJamaica. Tamba pane yakachena, chena-jecha mahombekombe akakwenenzverwa nekristaro-yakajeka makungwa. Shandisa zororo remhuri mumakamuri akasarudzika uye masuti. Nakidzwa neakawanda ezviitiko zvisingaite zvinonakidza uye zvinonakidza zvevana vezera rega rega. Mahombekombe ese emahombekombe-anosanganisira maParadise Island mapaki emvura, Sesame street® mavara, makambi evana, uye inonakidza nightclub yevechidiki. Chokwadi, Mahombekombe ese-anosanganisira maresitorendi muJamaica neTurks & Caicos anovimbisa isingakanganwike mhuri zororo mapakeji pasi peCaribbean zuva. Kuronga muchato? Beaches Resorts inopa inoshamisa yekuenda michato uye honeymoon mapakeji.
Usatore izwi redu kwazviri
Rakanakisa ruzivo sosi iri mu wongororo yevaeni. Verenga zvakataurwa nevaenzi ava rinenge mwedzi wapfuura paTripAdvisor nezvezororo ravo paBeach resort.
Beaches Turks & Caicos muProvidenciales
Zororo reCaribbean muchitsuwa chechokwadi - yakasarudzwa # 2 Caribbean Resort yeMhuri neTripAdvisor
L1279DGkathyf: “Wakaenda kunonaka 16! Zvaive zvakanakisa! Ivo bartenders uye vanomirira vashandi, kugamuchirwa - zvese zvinoshamisa! Maresitoreti aive akanaka! Tashana kunyanya muNeptune yaive pamusoro uye kupfuura !!!! Zvirokwazvo ndaizodzokera! ”
Mahombekombe Negril muJamaica
Inowanikwa paNegril inozivikanwa 7-Mile Beach - Yakavhoterwa # 1 Caribbean Resort yeMhuri neTripAdvisor
Voyage35019172706: “Tiri kugara zvinoshamisa pamabhichi. Imba yedu yakanaka. Yangu yepakati inochida uye yaita toni yeshamwari. Ricardo akanyatso kutichengeta kubhawa uye Adrian padziva hombe. Chikafu chave chakanakisa. Chokwadi tichadzokera kuichi chitsuwa cheparadhiso. ”
Mahombekombe Ocho Rios muJamaica
Jamaica yemhuri kumahombekombe egungwa - Vakasarudzwa Vepamusoro 5 Caribbean Resort yeMhuri neTripAdvisor
kelizabeth_13: “CHESE chinhu chaishamisa. Chikafu, mafambiro, makamuri, & vashandi !! Kutendeseka, ndinofunga kuti vashandi vanoita kuti nguva yako 1000x ive nani. Ivo vane hushamwari, vanogamuchira, uye zvakawandisa ingova nechokwadi chekuti unochengetwa. Chikwata cheshopa rekushambadza chinoshamisa. Glenroy, Oshan, Sherief, Sheldon, Marlon, Ackeem, Triston, & Shan vaigara vachifara uye vachigamuchira. Glenroy akagadzira yega yega kudhiraira, kunakidza, & kuchengeteka! Icho chaive chaicho chiratidzo cherwendo rwangu. Iyo yekutsvaira snorkeling mugirazi chikepe inofanirwa kuita futi. Ini handigoni kumirira kubhucha futi !! 10/10 rwendo urwu. ”
Zvese Chaizvoizvo zvinosanganisirwa
PaMahombekombe, chero chinhu chingafungidzirwa chakabatanidzwa. Hapana kudikanwa kwezvikwama, ingokanda zvako zvaunofunga kumhepo dzinopisa. Shangu dzinotsanangura zvese-zvinosanganisira nekusanganisira zvese izvi:
Maresitorendi & Mabhawa
Pirates Island Mvura Mapaki
Dzinotyaira Mvura Mitambo
Gorofu & Nyika Mitambo
Caribbean Mahombekombe Akanakisisa
Nightlife & Varaidzo
Robert Mondavi Twin Oaks® waini